Как правильно выращивать арбузы и дыни в теплице - Сад и огород
Ny fandriana melon-melon ao amin’ny trano fonenana
Mikarakara pastèque sy melons ao amin’ny trano fandroana — toro-hevitra mahasoa
«Mitombo kely ny kôbrà sy ny melons, mandanjalanja momba ny 2-3 kg, saingy ny voankazo rehetra dia samy manana ny fotoany, nefa tena mamy sy mamy!» © mpanoratra: D.Sved
Mampitombo melon sy pastè ao amin’ny trano fonenan’ny trano fivoahana ihany aho, fa eo am-pandriana isan-karazany.
Ny fambolena efa niorim-pony nandritra ny fotoana lava dia narary, ka tao anatin’ireo taona faramparany dia namafy voa teo amin’ny farafara zaridaina izy ireo.
Manomana azy ireo mialoha aho; Mitazona ny andro amin’ny vahaolana malemy avy amin’ny permanganate potassium aho (eny an-dalana, manao toy izany koa aho amin’ny voankazo sy voatabiha). Taorian’ny nanasa, nanasa sy namafy voa 2 tao amin’ny lavaka.
Ataoko ao anaty lavaka 80 cm izy ireo avy eo, manondraka lavenona vitsy sy metatra superfosfat ho an’ny tsirairay amin’izy ireo (araka ny torolalana).
Ny fandriam-bahiny voalohany mba hahazoana mangatsiaka be indrindra amin’ny masomboly ahafahako mitsambikimbikina. Miaraka amin’ny fiakaran’ny hafanana aho dia mamafa izany ao anaty lavaka, mba hamerina azy indray any amin’ny farafara zaridaina raha averina indray ny orana.
Mikarakara molona sy pastèka mitovy aho.
Manapaka ny fandriana aho mandra-pahalehibe ny kirihitra — ny pastèque sy ny melons dia tsy tian’ny polisy. Noho izany antony izany, mitandrema amin’ny fandroahana sy ny fikarakarana: mila atao eo amin’ny fototry ny kirihitra izy ireo. Noho izany, raha mbola kely ny zavamaniry dia tsara kokoa ny mametraka sticks-mena eo amin’ny vato.
Rehefa mameno ny melon, manomeza vahaolana mullein (1: 10). Taorian’izay — fotoana vitsy monja amin’ny vahaolana amin’ny vongan-dranomandry (araka ny torolàlana).
Miteny izy ireo Ny votoatin’ny siramamy kokoa dia tsaratsara kokoa hijanonan’ny rano aorian’ny voankazo. Nefa ahoana no tsy ahafahana manondraka ny zavamaniry rehefa mafana ny andro ary maina ny tany, ary mbola fotsy ny karavasy? Noho izany, dia mampaniry ny vanim-potoana manontolo ho faneva aho — indray mandeha isan-kerinandro. Ny votoatin’ny siramamy dia manome karazany maro — ohatra, ny toeram-pambolena samihafa melon iray dia mitombo hatrany.
Manindrona ny fako mitombo aho aorian’ny famolavolana ny voany faharoa amin’izy ireo, i.e. Ao amin’ny zavamaniry amin’ny farany dia mety hisy fifandonana marobe, fa ny tsirairay fotsiny dia ny 1-2 amin’ny foetus.
Eo ambany ny pastèque sy ny melons izay niforona, tsy maintsy mametraka ireo takelaka aho, fa raha tsy izany dia hokosehina izy ireo.